May Myat Swe's Likes - Myanmar Network
May Myat Swe's Likes
Back to May Myat Swe's Page
"ဆိုးပေ့"သားသမီးတွေ ထိုင်း-မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲအပြီးပရိတ်သတ်ရဲ့ဂုဏ်ယူသံ၊ အားပေးသံ၊ ငိုကြွေးသံ၊ မချိတင်ကဲညည်းညူသံပေါင်းများစွာတို့ကဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် နံနက်ခင်းနှင်းနဲ့အတူ အုံ့ဆိုင်းနေတော့သည်။ “ကျိုးစားမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ… Discussion "ဆိုးပေ့"သားသမီးတွေ 62 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Havi… Having said that (အဲ့ဒီလိုပြောပေမယ့်လည်း) You say having said that before adding something that makes what you have just said less strong: အဲ့ဒီလိုပြောပေမယ့်လည်း (having said that) ကို သင်ပြောလို… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Havi… 48 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Hear… Have you heard the latest? (နောက်ဆုံးသတင်းကြားပြီးပြီလား) You say have you heard the latest? when you want to know if someone has heardarecent piece of interesting news or gossip: နောက်ဆုံးသတင်… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Hear… 44 Likes English Conversation Lessons (Offering and a… Offering and accepting help (အကူအညီပေးရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် အကူအညီကို လက်ခံခြင်း) Can I help you with your bags? / Do you needahand/ any help with that? / Shall I take that for you? အိတ်တေ… Discussion English Conversation Lessons (Offering and a… 50 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (How’… How’s it going (အဆင်ပြေရဲ့လားကွ။?) သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ပြောတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ နေကောင်းရဲ့လား အနေအထိုင် အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေလားလို့ မေးချင်ရင် how's it going ကို သုံးနိုင်တယ်။ Hi, Jack. How's it… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (How’… 175 Likes